Impendulo yoMzantsi Afrika kwiZithintelo eziTsha eziBekelweyo zokuHamba
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo » Impendulo yoMzantsi Afrika kwiZithintelo eziTsha eziBekelweyo zokuHamba
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Safety • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukusabela koMzantsi Afrika kwiZithintelo zokuHamba
Oku kulandela ukubhaqwa kwe i-Omicron entsha eyahlukileyo.
UMzantsi Afrika uzilungelelanisa nesimo soMbutho wezeMpilo weHlabathi malunga nezithintelo zakutsha nje zokuhamba.
I-World Health Organization uye wabongoza iinkokeli zehlabathi ukuba zingabandakanyeki kwiintshukumo zokugebenga amadolo kwaye uye walumkisa ngokumiselwa kwemiqathango yohambo.
Ugqirha uMichael Ryan (iNtloko ye-WHO yeeNgxaki eziNgxamisekileyo) uye wagxininisa ukubaluleka kokulinda ukubona oko idatha iya kubonisa.
“Sibonile kwixa elidlulileyo, ngalo mzuzu kukho naluphi na uhlobo lokukhankanywa kwalo naluphi na uhlobo lokwahluka kwaye wonke umntu uvala imida kunye nokuthintela ukuhamba. Kubaluleke kakhulu ukuba sihlale sivulekile, kwaye sihlale sigxile,” utshilo uRyan.
Kuye kwaqatshelwa ukuba iintlobo ezintsha zala mazwe zichongiwe. Nganye kwezo meko azikhange zibenalo unxibelelwano lwamva nje kunye ne-Afrika eseMazantsi. Kubalulekile ukuqaphela ukuba indlela asabela ngayo loo mazwe yahluke kakhulu kumatyala akuMazantsi e-Afrika.
Lo mjikelo wamva nje wokuvalwa kokuhamba ufana nokohlwaya uMzantsi Afrika ngolandelelwano lwawo oluphambili lwe-genomic kunye nokukwazi ukubona iintlobo ezintsha ngokukhawuleza. Inzululwazi egqwesileyo kufuneka iqhwatyelwe izandla kwaye ingohlwaywa. Uluntu lwehlabathi lufuna intsebenziswano kunye nentsebenziswano kulawulo lobhubhani we-COVID-19.
Indibaniselwano yamandla oMzantsi Afrika okuvavanya kunye nenkqubo yawo yokugonya ekhawulezileyo, exhaswa luluntu lwenzululwazi olukumgangatho wehlabathi, kufuneka inike amahlakani ethu ehlabathi intuthuzelo esiyenzayo njengoko elawula ubhubhane. UMzantsi Afrika ulandela kwaye unyanzelise imigaqo yezempilo eyaziwa kwihlabathi jikelele ye-COVID-19 kuhambo. Akukho bantu abosulelekileyo bavumelekileyo ukuba balishiye ilizwe.
UMphathiswa uNaledi Pandor uthe: “Ngelixa silihlonipha ilungelo lawo onke amazwe lokuthatha amanyathelo okhuseleko ayimfuneko ukukhusela abemi bawo, kufuneka sikhumbule ukuba lo bhubhani ufuna intsebenziswano kunye nokwabelana ngobuchwephesha. Inkxalabo yethu ekhawulezileyo ngumonakalo obangelwa zezi zithintelo kwiintsapho, kumashishini okhenketho nawokhenketho nakumashishini.”
UMzantsi Afrika sele uqalile uthethathethwano namazwe abeke imiqobo yokuhamba ngeenjongo zokuwacenga ukuba aphinde ayiqwalasele.